Laacibka BISHA ee Man United oo la magacaabay – Gool FM
Laacibka BISHA ee Man United oo la magacaabay
(England) 03 Nof 2016. Xiddiga Bisha Oktoobar ee kooxda Man United ayaa la doortay 90,000 oo cod ayaana baxday oo u coddeysay saddexda xiddig ee u sharaxaneyd abaal marintan Juan Mata, Ander Herrera iyo Antonio Valencia.
Mata ayaa ku guuleystay abaal marinta laacibka bisha ee Red Devils kaddib markii uu helay 44% halka xiddiga ay dhalashada wadaagaan ee Herrere uu soo galay labaad inkastuu Mata dheeraa saaxiibkii 198 cod.
Xiddiga reer Ecuador Antonio Valencia ee galay kaalinta saddexaad ayaa helay 13%.
Man United ayaa guuleysatay labo kulan bishii Oktoobar, guushii ay ka gaartay dariskiida Man City ee EFL Cup iyo guushii waynayd ay ka gaartay Fenerbahce tartanka Europe League.
“Ma ahan inay faraha la soo gasho dhaqan soo jireen ah.”. Arsene Wenger oo furka ku tuuray FIFA